Australia inowedzera ruzivo rwekufambisa kwevanhu paApple Mepu | Ndinobva mac
Australia inowedzera ruzivo rwekufambisa veruzhinji paApple Mepu
Kunyangwe isu tiri pakati paAugust, vakomana vanobva kuCupertino vanoramba vachigadzirira zvese kuitira kuti mumwedzi waGunyana vese, vashandisi vanakirwe neshanduro dzichangoburwa dzeMacOS, tvOS, iOS uye watchOS. Asi ivo havasi kungoshanda chete pane anotevera mavhezheni eanoshanda masisitimu emidziyo yavo, ivo vari kushandawo pamamepu eApple. Kwemaawa mashoma, vashandisi muAustralia vanogona kutonakidzwa neruzivo rwekufambisa rwevanhu, kubvira iyo Perth neBrisbane nzvimbo dzakabatana huwandu hwakawanda hwemaguta uko ruzivo urwu rwunowanikwa kutenderera pasirese.
Asi mukuwedzera, Apple zvakare yakawedzera sevhisi yemepu munzvimbo dzeGold Coast, Sunshine Coast, Mandura uye Rockingham. Sezvazvinowanzoitika mumhando iyi yekuvandudzwa, ruzivo rwunoratidzwa nemakodhi emavara, zvinozotibatsira kusiyanisa iyo iri mitsara yekufambisa yatinogona kushandisa nguva dzese. Parizvino, ruzivo urwu rwaingowanikwa muAdelaide, Melbourne neSydney.
Sezvo AppleInsider yakadzidza, nyika inotevera kutanga kunakidzwa neApple Mepu ichave iri Ireland, uko nzvimbo huru dzezvitima dzakatoratidzwa neruvara rwepinkish, pamwe nehukuru hwadzo hwemukati, chimwe chinhu chakafanana nezvakaitika mwedzi mishoma zvisati zvaitika muMadrid, pamberi pekuuya kwepamutemo kweruzivo rwekutakura kwevanhu kuguta reSpain. .
Pakukwirira kwegore ratinozviwana isu uye kana kuchine zvishoma zvekuenda isati yatanga iyo vhezheni yekupedzisira yeIOS 11, zvingangoita kuti Apple vakomana vamirire keynoe yekuratidzwa kweiyo nyowani iPhone , kana tangisa iyi sevhisi muIreland apo iOS 11 painosvika pamusika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Australia inowedzera ruzivo rwekufambisa veruzhinji paApple Mepu
ChiSpanish kana Spanish Spanish keyboard?